Mogadishu Journal » Kheyre” Aniga madaxweynaha marnaba waxba isku khilaafin
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in 8-dii bilood ee ay wada shaqeynayeen isaga iyo Madaxweyne Farmaajo aysan hal mar xitaa is khilaafin, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay taariikh cusub.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad ka dhacday xalay magaalada Muqdisho oo ay ka soo qeyb galeen boqolaal dhalinyaro ah, kaasoo loogu baroor diiqayay qaraxii Isgoyska Zoobe ka dhacay oo ay muddo bil ka soo wareegatay.
“8-dii bilood ee aan xafiiska joogay aniga iyo Madaxweynaha marna isma khilaafin, wax muranna na,a soo dhex gelin, waana mid ku cusub dhagaha shacabka Soomaaliyeed”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Waxaa uu sheegay in horay shacabka Soomaaliyeed ay u arki jireen in madaxda ugu sare dalka in oo arrimo siyaasadeed isku haya, laakiin aanay hada taas jirin.
Hase ahaatee marka dib loo eego Sooyaalka khilaafka siyaasadeed ee Madaxda dowladda soo kala dhex gala ayaa la dareemi jiray marka Xafiiska ay muddo sanad ah joogaan Ra’iisul Wasaarayaashii soo maray dalka, marka la eego afartii sano ee xukunka hayay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh oo ay sanadka ugu horeeya is qaban jireen Ra’iisul Wasaarayaashii hore, sida Cabdi Faarax Shirdoon iyo C/wali Sheekh Axmed, oo labadaba markii khilaafka kala dhaxeeyay Madaxweynaha ay ugu dambeyn kalsoonida kala laabteen Baarlamaanka.
Hadalka ka soo yeeray Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ah in isaga iyo Madaxweynaha aysan is khilaafin ayaa ku soo aadaya, iyagoo wajahaya mucaarado xooggan oo uga imaanaya Golaha shacabka iyo siyaasiyiin dhaliilsan qaabka ay wax u wadaan.